Zvimwe zvinodzidzwa paKushinga Phikelela
You are at:Home»NHAU DZEMUNO»Zvimwe zvinodzidzwa paKushinga Phikelela
By Munyori weKwayedza on	 June 29, 2018 · NHAU DZEMUNO
KUSHINGA Phikelela Polytechnic ine zvikamu zvakasiyana zvedzidzo zvinosanganisira Construction and Engineering, Engineering, Applied Sciences, Applied Arts, Information Technology, Business Studies, Management Studies neEnvironmental Health.
Chikamu cheApplied Sciences chine zvidzidzo zvinoti Horticulture, Science Technology, Water and Waste Management neEnvironmental Health.
VaFunnie Chaka vanotungamirira chikamu ichi vanoti zvidzidzo zvavo zvinotangira pazvikamu zvakasiyana.
“Tinotangira pachitupa cheNational Certificate kusvika paNational Diploma,” vanodaro VaChaka.
Muhurukuro nevamwe vari kuita chidzidzo cheWater and Waste Management, vanoti vari kuwana mukana wekuita tsvakiridzo dzekugadzira michina yekuchenesa mvura yekunwa kubva mumadhamu kana muzvibhorani.
LineMary Mpofu naGenius Chidemo vanoti kuburikidza netsvakiridzo dzavari kuita, veruzhinji vanokwanisa kuchenesa voga mvura yavanonwa vachishandisa nzira dzakareruka.
“Veruzhinji vanokwanisa kugadzira voga kamuchina kekuchenesa mvura kanonzi ‘home-made sand filter’. Zvinodiwa mukugadzira muchina uyu zvinoti mugomo watinoisa matombo pamusoro potevera marasha, pasi toisa ivhu remurwizi ratinoti river sand. Marasha akakosha nekuti anochenesa mvura zvakare anoita kuti ikwanise kunwika zvakanaka,” anodaro Chidemo.
Pakoreji iyi pane imba yekuverengera wakasunguka iyo inotungamirirwa naVaBert Nyabadza vanova librarian.
Vadzidzi veApplied Sciences
VaNyabadza vanoti imba yavo yekuverengera ine mabhuku ezvidzidzo zvakasiyana echizvino-zvino.
“Takaona zvakakosha kuti koreji ive neimba yokuverengera uye kuti vadzidzi vawane ruzivo rwechimanje-manje pamwe nemasai-sai vachishandisa makombiyuta kuita tsvakiridzo muzvidzidzo zvavo. Vadzidzi vanoverenga zvakare mabhuku ayo anenge achibva kuZimbabwe University Library Consortium (ZULC),” vanodaro.
Vanoenderera mberi vachiti: “Tine bandiko reResearch & Development Club iro rine donzvo rekuona kuti imba yokuverengera ine mabhuku ose uye anofambirana nenguva.”
VaNyabadza vanoti zvakare vakaparura kirabhu yeTechHub and Robotics iyo ine chinangwa chekukurudzira kushandiswa kwemakombiyuta.
“Tine chirongwa cheGamification and Game Development chine musanganiswa wemitambo yepamakombiyuta nekuverenga. Izvi zvinobatsira pakuti vadzidzi vakasike kubata zvavanenge vachiverenga,” vanodaro VaNyabadza.
Zvichakadai, koreji iyi iri mushishi kuvandudza zvidzidzo zvayo zvinosanganisira zvekuchikamu cheEngineering Department uye munguva inotevera ichange yave nechidzidzo chitsva cheMachine Shop Engineering.
VaChinyani Ngoni – avo vanova mumwe wevadzidzisi veAutomotive Engineering – vanoti vanoona zvakakosha kuti varambe vachivandudza zvidzidzo zvavo kuitira kuti vafambirane nenguva.
“Tine zvidzidzo zvinosanganisira Fabrication Engineering, Automotive Engineering neAuto Electrics uye munguva inotevera tichange tava nechidzidzo chitsva, cheMachine Shop Engineering.
“Tinodzidzisa vadzidzi kuti vazive kuita mabasa emawoko. Donzvo redu nderekuti vadzidzi vazive mabasa aya pavanozoenda kunoshanda kumakambani kana kuti apo vanenge vachizvishandira,” vanodaro VaNgoni.
Vanoti vadzidzi vavo veBrick Laying ndivo zvakare vanoita mabasa ekuvaka zvivakwa zvepakoreji yavo.
“Vadzidzi vedu ndivo vakavaka tangi ratinochengetera mvura, dzimba dzatinochengetera michina yedu, garaji nedzimwe dzimba dzinogara vadzidzisi vepano,” vanodaro VaNgoni.
Muhurukuro nevasikana vaviri vari kuita chidzidzo cheBrick Laying – Rutendo Jani (18) naLovenes Chitsike (21) – vanoti vakabvira kufarira nyaya dzekuvaka vachiri padanho resekondari.
“Takaona kuti nyika yatiri mazuva ano inoda vane ruzivo rwemabasa emawoko uye vanhukadzi vashoma vari kuita mabasa akadai. Saka tiripo pakuratidza vanhukadzi kuti mabasa anonzi akaoma haasi evanhurume chete, tinokwanisa kuaitawo,” anodaro Chitsike.